ဘဝမှတ်တိုင်: Phone မှာ Themes လှလှလေးတွေအသုံးပြုချင်တဲ့ သူတွေအတွက်: GLASS APEX /NOVA /GO /SMART THEME v7.4 Apk
Phone မှာ Themes လှလှလေးတွေအသုံးပြုချင်တဲ့ သူတွေအတွက်: GLASS APEX /NOVA /GO /SMART THEME v7.4 Apk
Android themes လေးတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ.. ဒီ themes လေးတွေကတော့ Apex Launcher နဲ့ Go Launcher ပေါ်မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ Themes လေးတွေပါ။ Themes ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ android phone တွေပေါ်မှာ style လှလှပပလေးတွေကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုလိုတဲ့ သူတွေအတွက်တော့ တကယ့်ကို အဆင်ပြေစေတဲ့application လေးတစ်ခုပါပဲ။ Icon ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာလဲ လှပတဲ့အတွက် အသုံးပြုလိုသူတွေအတွက် စွဲမက်စရာကောင်းတဲ့ စွဲလန်းမှုတစ်ခုကို ပေးစွမ်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် Themes ကို Launcher ပေါ် ထည့်သွင်းနည်းကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
Apex Launcher ထဲသို့ Themes ထည့်သွင်းအသုံးပြုနည်း
Apex Launcher ကိုအရင်ဆုံးဖုန်းထဲမှာ install လုပ်ထားလိုက်ပါ။ ပြီးရင် theme ကို install ထပ်လုပ်ပါ။
Apex Launcher ရဲ့ settings ကိုဖွင့်ပြီး Themes setting ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။ Theme setting ထဲမှာ Glass Theme ကိုရွေးးချယ်ပေးလိုက်ရင် ကိုယ်အသုံးပြုနေတဲ့ android phone ရဲ့ theme style က
Go Launcher ထဲသို့ Themes ကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုနည်း
Go Launcher ကိုဖွင့်ပြီး MENU key ကိုနှိပ်ကာ Theme Preferences ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Glass Themeကိုရွေးပေးလိုက်ရင် Go Launcher မှာ Glass Theme ကို အသုံးပြုနိုင်တာကိုတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
ဒီ application လေးကိုတော့ android version 2.0 နဲ့အထက်မှာ ရှိရုံနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 12/01/2013 08:24:00 pm
DjjoeMan Slide Unlock (MMF) For Android
Battery Booster (Full) v6.9 APK
Files Upload & Sharing with Google Drive (Google D...
Internet Connection ကို သိသိသာသာ မြန်စေတဲ့ SpeedCo...
One Click Root !!! V Root v 1.7.4 (New Update)
SAMSUNG ဟန်းဆက်များ Android 4.3 သို့ ဗားရှင်းမြှင့...
Windows 8 မှာ Zawgyi Font & Keyboard အသုံးပြုမရတဲ့...
Speed Up And Optimize Your PC (All in one PC Suite...
အားလုံး မျှော်လင့်နေကြတဲ့ MM Keyboard For iOS7+ ...
iOS7တွင် မြန်မာဖောင့် နှင့် keyboard သွင်းနည်း
Samsung Galaxy S4 (I9500) 4.3 THL (မြန်မာစာ ပါဝင်ြ...
System Monitor v1.2.8 Apk
Wondershare Video Editor 3.1.6.0 Full Crack (Video...
Samsung Galaxy Note2N7100 ကို Official 4.3 တင်ခြ...
Samsung Glaxy Note2GT-N 7100 Android Version 4.3...
Galaxy Note3 SM-N9005 ကို မြန်မာစာအတွက် Official 4...
Samsung Android Version 4.3 နှင့် အထက်ဖုန်းတွေမှာ ...
နံပါတ်တစ်လုံးထဲနှိပ်ရုံနဲ့ဖုန်းခေါ်ပေးမယ့် - PixelP...
Root APK - ကွန်ပျူတာမလိုဘဲ Root လုပ်နိုင်သော Appli...
Facebook Phone Number တောင်းနေသူများအတွက် ဝမ်းသာစရ...
Picsay Pro Android အတွက် နောက်ခံ ပုံတွေ ပေါ် မှာ စာ...
အင်တာနက် ပမဏဘယ်လောက်သုံးထားလည်းဆိုတာကြည့်နိုင်တဲ့ ...
SAYTYA - Free Calls and Chats (for android) Apk
မရှိမဖြစ် ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Wondershare PDF Editor 3...
Google Play Store မပါတဲ့ China Android ဖုန်းတွေကို...
Advanced Video Compressor (DVD ဇာတ်ကားတွေကို အခွေတ...
Apk✔ -Android ဖုန်းနဲ့ pdf file တွေကို ကြည်လင် ပြတ...
INCREASE WIFI Speed Booster (for android)
GlarySoft Glary Utilities Pro v4.2.0.74 Full
Camera ZOOM FX v5.0.4 Apk
imobile i style 7.1 firmware ပြန်တင်ချင်သူများအတွက...
Tiral Version Software တွေကို အမြဲတမ်းအသုံးပြုလို့...
Samsaung Galaxy S3 Mini မှာ မြန်စာ ထည့်သွင်းနည်း (...
SONY Xperia တွေမှာ Android 4.3 တရားဝင် Update လုပ်...
Android Devices တွေအတွက် Adobe Flash Player Versio...
How to Root Samsung Galaxy Tab310.1 P5200/P5210
USB Flash Drives နဲ့ Memory card တွေမှ Shortcut Vi...
ဖုန်းဝင်လာတဲ့အခါ ပေါ်လာတဲ့ ရုပ်ပုံလေးတွေကို screen ...
အင်္ဂလိပ်-ဂျပန် - ရုရှား - ထိုင်း - ကိုးရီယား ငါးဘာသ...
✔Scare Your Friend v5.4 Apk✔
Brightest LED Flashlight Apk
Advanced SystemCare Ultimate 7.0.1.589 + Crack
iOS 7.x Jailbreak Tool ထွက်ပါပြီ (evasi0n7)
ကွန်နရှင်ကျနေချိန်မှာတောင်မြန်ဆန်ပေါ့ပါးတဲ့ UC Bro...
Photo movie creator Apk
Gtalk voice and video call Collection
Chat4MM (Gtalk with MMfont) Apk
Battery 100% Alarm 2.0.2 APK
Facebook မှ ကိုယ်ပိုင် Like Page လုပ်ချင်တဲ့ သူငယ်...
Dashrath Manjhi သို့မဟုတ် တောင်တွေကို ရွေ့လျားစေသူ...
Built In မြန်မာစာမပါသော Android ဖုန်းတချို့တွင် Bu...
Android ဖုန်းမှာScreenshot လွယ်လွယ်ကူကိူရိုက်မယ် ဆ...
PC Software တွေကို Full/ Crack with Serial Key တွေ...
Wifi Password တွေကို 95%အမှန်အကန် Hack ပေးနိုင်တဲ့...
✔Video Converter MP3 v1.1.7✔
✔Unrar App v1.0.3✔
♥ဖူးစာရှင် Apk♥(for android)
Quick PDF Scanner Version : 2.04.56 (All Android)
Viber v4.1.1.10 (For Andriod) December 17, 2013 ရက...
Huawei (U8661)(8818)(U8815)(C8812)(C8655) Root လုပ...
App Installer Backup Apk
Picsay Photo Editor Apk
2x Battery Saver
Advanced Mobile Care Apk
English Myanmar Dictionary Apk
Secret Video Recorder Pro v10.0 Apk (218.86 Kb)
Pcမှာ သီချင်းနားထောင်လျှင် စားသားပါမြင်ရတဲ့ ဆောစ့်...
Samsung Zawgyi Enabler v2.0 for Android
၂၀၁၄ ဗေဒင် ( for android)
✔Android ဖုန်း၏ အခြေခံ လုံခြုံရေး တည်ဆောက်ခြင်း✔
✔ CPU-z-v1.04 App(android)✔
Cracker လမ်းညွှန် 2.3 (မြန်မာဖောင့် အဆင်ပြေ၊ မပြေအာ...
Dr.Web v.9.00.1 + Full Life License For Android
Download AVG Anti Virus Security PRO for Android™ ...
Android ဖုန်းတွေထဲကနေ မြန်မာ ဗွီဒီယိုဇာတ်ကားတွေကြည...
HTC Desire 500 Root လုပ်နည်း